उद्धार गरिएकी भूकम्पपीडित युवती ५० हजारमा बेचेको खुलासा - Nepal News - Latest News from Nepal
उद्धार गरिएकी भूकम्पपीडित युवती ५० हजारमा बेचेको खुलासा
३ असार, काठमाडौं । राजधानीमा उनको गुजारा जेनतेन चल्दै थियो। छापाखानामा पसिना बेचेको कमाइले दैनिक खर्च टर्थ्यो। जीवनयात्रा यसरी नै घसि्रँदै थियो। वैशाख १२ गते अचानक भुइँचालो आयो। भुइँचालोले राजधानी र उनको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकका थुप्रै घर भत्काइदियो। भक्तपुरको डेरा भत्किएपछि पालमुनि रात काट्न विवश हरिमाया (नाम परिवर्तन) को त यही भूकम्पले झन्डै जीवन नै भत्काइदिएन।
बिहेको प्रलोभनमा भारत, मेघालय पुर्‍याएकी उनी ५० हजारमा बेचिइसकेकी थिइन्। धन्य ! आफू राखिएको होटल सञ्चालिकाको निगरानीले यौनकोठीको नरक पुग्नबाट उम्किइन् र प्रहरीले उद्धार गरी नेपाल फर्कायो।
उनलाई झैं भारत पुर्याइएका १५ युवती नरकबाट उद्धार गरिए पनि भारतमै एक संस्थाको संरक्षणमा छन्। अझै केही युवतीको अत्तोपत्तो छैन।
मेघालयमा सुमनले नै दिदी भन्दै चिनाएकी एक युवतीले जब उनलाई ५० हजारमा किनेको सुनाउँदै दिल्ली जान कर गर्न थालिन्, बल्ल उनले भेउ पाइन्, विश्वास गरेर नेपालदेखि सँगै आएको व्यक्ति त चेलीबेटी बिक्री गर्ने दलाल पो रहेछ।
घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरका एसपी विकास श्रेष्ठका अनुसार सँगै काम गर्ने सुमनले वैशाख २० गते हरिमायालाई भगाएर कोटेश्वरमा रहेका दाइको घरमा २ दिनसम्म राखेका थिए। कोटेश्वरमा २ दिन बसेपछि सुमनले उनलाई सस्तोमा कपडा किन्ने भन्दै ट्याक्सीमा राखेर चितवन पुर्याएपछि राम्रो जीवन बिताउने भन्दै २ वर्षसम्म भारतमा बस्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
सुमनको बदलिएको व्यवहारले भने उनलाई कताकता चिसो पसिसकेको थियो। बसबाट ओर्लिनै नदिने, बसमा बस्दा पनि सलले मुख छोप्न लगाउने, शौचालय जाँदासमेत पछि लाग्ने उसको व्यवहार अनौठो लागेको थियो हरिमायालाई । आफू बेचिनै लागेको त उनले कसरी सोच्नु !
कपडा किन छुट्ट्याएको भनेर सोध्दा सुमन ढोकामै थिए। केही नबोली बाहिरिए उनी। हरिमायाले कपडा नछुट्ट्याउनुस् भनेर जिद्दी गरेपछि दिदी भनाउँदीले उनलाई भनिन् , ‘तिमी मसँग दिल्ली जाने हो।’ आफू एक्लै नजाने बताएपछि ती महिलाले ‘सुमनले ५० हजार लिइसक्यो, तिमी मसँग जानुपर्छ’ भनिन्। विवाहको प्रलोभनमा सुमनले आफूलाई बेचेको बल्ल भेउ पाइन् हरिमायाले।
नेपाल प्रहरीमै रहेका आफन्तमार्फत घटना महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरसम्म पुगेपछि मेघालयको प्रहरीसँग समन्वय गरेर प्रहरीले उनलाई सकुशल स्वदेश फर्काउन सफल भयो। उनलाई विवाहको प्रलोभनमा पारेर मेघालयसम्म पुर्याएर दलाललाई बेच्ने सुमन भने अझै फेला नपरेको नागरिकमा खबर छ ।
विदेशी दाताले विवरण लुकाउँछन्